10 Nkwụsị dị ịtụnanya na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Nkwụsị dị ịtụnanya na Europe
Train Travel Austria, Train Travel Britain, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Holland, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Switzerland, Train Travel The Netherlands, Train Travel UK, Travel Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 31/12/2021)
Ihe ngosi, obodo dị omimi, nnukwu ụlọ akụ, na ụlọ ndị na-adịghị ahụkebe, ndị a 10 ịtụnanya nkwụsị na Europe nwere ike ịchọ ịgbatị oge ọnụnọ gị, mana ha bara uru nleta ahụ.
1. Ịtụnanya nkwụsị na Europe: Rakotzbruck, Germany
Ezochiri n'obere ogige dị na Saxony, Akwa akwa Ekwensu, makwaara dị ka Rakotzbrucke, bụ kpam kpam kwesịrị ịma aka njem si Berlin. The gburugburu nkume akwa akwa si 1860, bụ ihe anya na-adọrọ mmasị ma na-adọrọ mmasị ndị njem n'ihi ọdịdị na ihe owuwu ya pụrụ iche. Nkọ spiers n'akụkụ ọ bụla na nnọọ okirikiri akwa, dị ka ekwensu n'onwe ya ga-eme ha, ma n'ezie ihe niile mmadụ mere.
Ọzọkwa, akụkọ na-ekwu na ndị mmadụ na-arụ àkwà mmiri a ka ọ bụrụ ihe e ji achụ àjà nye ekwensu n'oge ahụ, ma taa ọ bụ naanị ebe anwansi. Enweghị ọtụtụ ihe a ga-eme nso, ya mere ọ kacha mma ijikọta nleta na Rakotzbrucke na njem na ogige Kromlau.
Frankfurt gaa Berlin na ụgbọ oloko
Leipzig gaa Berlin na ụgbọ oloko
Hanover gaa Berlin Na ụgbọ oloko
Na Hamburg na Berlin Na A Train
2. Champagne-Ardenne, France
Ndagwurugwu mara mma na mbara igwe na-adịghị agwụ agwụ nke ubi-vine na mmanya ọcha. Ya mere, Ileta Champagne-Ardenne nwere ike ịbụ nkwụsị magburu onwe ya na njem gị na Ịtali Mpaghara mmanya, Tuscany. Obodo champagne dị n'etiti Paris na Lorraine. Ya mere, nkwụsị n'otu n'ime nnukwu ubi vine na Champagne-Ardenne nwere ike ịbụ ihe mgbakwunye dị egwu na a ụmụ agbọghọ’ njem na Paris.
Ọzọkwa, ịbụ ebe obibi champagne mara mma, mpaghara a nwere nnukwu mkpa akụkọ ihe mere eme. Ọmụmaatụ, Joan nke Arc dị ịtụnanya si n'ime obodo Domremy. Ya mere, eleghị anya ị ga-anụ akụkọ dị ịtụnanya mgbe ị na-edetụ mmanya n'ubi vine French mara mma. Ndabere ala, Champagne-Ardenne bụ otu n'ime ha 5 kacha ịtụnanya nkwụsị na France.
3. Ịtụnanya nkwụsị na Europe: Oberhofen Castle, Switzerland
N'ikpere mmiri nke ọdọ mmiri mara mma na-agbanwe, Oberhofen Castle bụ otu n'ime ụlọ ndị mara mma na Switzerland. Oberhofen Castle dị n'etiti Bern, Interlaken, na ọdọ mmiri Lucerne. Ya mere, nleta na Oberhofen Castle na Lake Thun bụ ọmarịcha nkwụsị n'okporo ụzọ mara mma.
Na mgbakwunye, Ụlọ ihe ngosi nka nke nnukwu ụlọ nke malitere na narị afọ nke 13 nwere ogige mara mma ebe ị nwere ike ịmasị ọtụtụ osisi ndị mara mma., okooko osisi, na echiche nke Alps. N'ihi ya, Ị nwere ike ịtụgharị njem ọkara ụbọchị ka ọ bụrụ njem ụbọchị zuru ezu na Oberhofen, yana ogige ntụrụndụ mara mma dị nso ka ị nweta ịdị jụụ yana echiche mara mma, ebe igwe mmadụ na-agba ọsọ na Lucerne.
Jiri ụgbọ oloko wee banye na Zurich
Lucerne jiri ụgbọ oloko gaa Zurich
Site na ụgbọ oloko gaa Bern na Zurich
Site na ụgbọ oloko gaa Geneva na Zurich
Na-ele anya na ọmarịcha ọdọ mmiri Constance, Vorarlberg bụ onye ama ama maka ọmarịcha ọdọ mmiri na echiche ugwu. Obodo Austrian dị n'okpuru Vorarlberg, mara mma ihe ndozi nke nnukwu ugwu, na okporo ụzọ ndụ ndụ. Ma ị na-esi Liechtenstein na-aga Austria ma ọ bụ Germany, Vorarlberg bụ ihe nkwụsị dị ịtụnanya na njem ụgbọ oloko gị gafee Europe.
nri ụtụtụ ugwu, ma ọ bụ izu ụka dị jụụ na okike n'ihu obodo na-arụsi ọrụ ike, ị kwesịrị iwepụta oge maka Vorarlberg. A maghị obodo a nke ọma n'etiti ndị njem, Otú ọ dị, Vorarlberg bụ ebe ị nwere ike ịhụ omenala na nri ndị Austrian. Ọzọkwa, Okirikiri ala Ọstrịa kacha mara mma ga-agba gị gburugburu, obodo nta, na ndise amam-ihe – Nke kacha mma Austria nwere inye, pụọ na ebe ndị njem nlegharị anya.
5. Ịtụnanya nkwụsị na Europe: Freudenberg, Germany
Obodo Freudenberg na-adọrọ adọrọ bụ otu n'ime obodo Germany, na obodo kacha mma na Europe. Isi ihe na-adọrọ mmasị ebe a bụ 80 ma ọ bụ ụlọ ọcha nwere osisi, mara mma karịsịa n'oge oyi. N'ihi ya, njem na Freudenberg snow kpuchiri ekpuchi bụ ihe agaghị echefu, nke ga-akpọrọ gị azụ n'oge na ala akụkọ ifo.
Ọzọkwa, Freudenberg dị n'etiti ugwu ugwu ndụ ndụ, na 160 km nke hiking ụzọ ụkwụ na nnukwu echiche. Mpaghara Westphalia mara mma n'oge opupu ihe ubi mgbe ihe niile na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma na-ama ifuru. The 6 awa ụgbọ oloko njem si Berlin bụ kpam kpam kwesịrị ya, for a glimpse of one of the most obodo ochie mara mma na Germany.
6. Ụzọ nke Giant, Northern Ireland
Echiche nke n'elu 40,000 Ogidi basalt hexagonal gbadara n'oké osimiri na-acha anụnụ anụnụ dị na Giant's Causeway bụ ọmarịcha ọmarịcha.. The eke ebube bụ ihe karịrị 6o nde afọ, enwere ike iru site na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, uhie, na ụzọ acha anụnụ anụnụ. Maka ọdịdị ha pụrụ iche, ogidi ndị a na-etinye okporo ụzọ Giant na nke ọma 7 ihe ịtụnanya ụwa ọzọ.
Ya mere, ọ baghị uru ikwu, Ụzọ Giant's Causeway bụ otu n'ime 10 nkwụsị kacha ịtụnanya ịme na Ireland. Ma ị na-eme njem site na Belfast ma ọ bụ Dublin, wepụta oge iji mee nke a ọmarịcha njem ụbọchị na Northern Ireland. Okirikiri ala Irish ahịhịa ndụ akwụkwọ ndụ gbara ya gburugburu, na oké osimiri na-acha anụnụ anụnụ n'ụkwụ ya, nzọụkwụ ọ bụla n'akụkụ ogidi ugwu mgbawa a ga-eme ka ị bịarukwuo nso na njem gị iji chọpụta ihe kacha mma na nke dị ịrịba ama n'ụwa..
7. Ịtụnanya nkwụsị na Europe: Zermatt, Switzerland
Nnukwu Alps buru ibu nke na ebe ọ bụla ị họọrọ ịkwụsị ga-ewepụ ume gị. Otú ọ dị, ọ dịghị ihe dị ka ịtụnanya echiche nke Swiss Alps na Zermatt. Ọ bụ ezie na Zermatt na-ewu ewu maka mkpọda ski ya dị egwu, ọ na-adị mma n'oge opupu ihe ubi na n'oge okpomọkụ.
Zermatt bụ ụlọ nke otu n'ime ugwu kacha mma na Europe, Matterhorn. Ọ bụ ezie na ọ dị ebube ma dị anya iru, Mma Zermatt bụ njem ụgbọ oloko dịpụrụ adịpụ site na Basel, Bern, na Geneva. Ya mere, Ị nwere ike ịbịa maka izu ụka ma ọ bụ mee ka nkwụsịtụ gị dị ogologo ruo ezumike na-agaghị echefu echefu na Swiss Alps.
Basel na-eji ụgbọ oloko eme ihe
Geneva na Zermatt na ụgbọ oloko
Bern na Zermatt na ụgbọ oloko
Lucerne na Zermatt na ụgbọ oloko
8. Alberobello Italy
Trulli na-adịghị ahụkebe ga-amasị gị, na mpaghara Salento mara mma. Ụlọ conical nwere ihu ọcha na elu ụlọ ndị a chọrọ mma malitere laa azụ n'afọ Bronze. Ụlọ ndị a pụrụ iche kwesịrị ịdịru nwa oge, ma ọtụtụ ndị lanarịrị oge na ihu igwe, na ọmarịcha obodo Alberobello. Alberobello bụ otu n'ime obodo ndị mara mma na Southern Italy, na nnukwu nkwụsị n'akụkụ oke osimiri Ịtali.
Ebe obodo a dị obere, Ị nwere ike iji ụgbọ oloko mpaghara gaa na mpaghara Alberobello na Trulli n'ụzọ dị mfe. Ụzọ a, Ị nwere ike ịme nkwụsịtụ ole na ole n'ime obodo ndị ọzọ mara mma, dị ka Lecce oge ochie, seaside bari, na Trani. Na mgbakwunye, obodo ndị a mara mma dị ntakịrị uzo-aka-uzọ na Italy na enweghị ndị njem nlegharị anya.
Site na ụgbọ oloko gaa Milan ka Rome
Florence na Rome na ụgbọ oloko
Venice jiri ụgbọ oloko gaa Rome
Naples gaa Rome na ụgbọ oloko
9. Ịtụnanya nkwụsị na Europe: Obodo Beaulieu-Sur-Mer France
N'etiti Monaco na Nice, na ọmarịcha French Riviera, Beaulieu-sur-Mer bụ ebe mara mma ị ga-akwụsị n'akụkụ oke osimiri wee maa elu maka imikpu na-enye ume ọhụrụ n'Oké Osimiri Mediterenian.. osimiri nkeonwe, Villas ndị dara oké ọnụ, na nnukwu echiche nke Peninsula Saint-Jean-Cap-Ferrat, ọ naghị enweta nrọ ọ bụla karịa nke a na Europe.
Na mgbakwunye na Beaulieu-sur-Mer, Enwere ọtụtụ nkwụsị na-adọrọ adọrọ n'akụkụ Les Corniches, okporo ụzọ ndị dị n'akụkụ French Riviera. Ụgbọala 30km na-amalite na Nice wee kwụsị na Menton, otu n’ime ebe kacha mara mma na Europe. Ebe ọ bụ naanị 30-km, enwere ma ọ dịkarịa ala 10 ịtụnanya nkwụsị n'okporo ụzọ a mara mma na Europe.
Dijon jiri ụgbọ oloko gaa Provence
10. Giethoorn, mba netherland
Ala ụlọ akị ahịhịa na 170 isuo, Giethoorn is a obodo di omimi na Netherlands. Ọzọkwa, na-aga n'akụkụ ọwa mmiri, n'okpuru àkwà mmiri osisi, gbara ya gburugburu na ala ndụ ndụ na okooko osisi, bụ ahụmahụ ị na-agaghị echefu echefu.
Obere obodo Giethoorn mara mma na National park Weerribben-Wieden bụ nkwụsị dị ịtụnanya na njem gafee Holland. Ebe obere obodo a jụrụ oyi na narị afọ nke 18, ekele nke oge a njem ọha na eze, Ị nwere ike ugbu a ga-esi Giethorn si Amsterdam na obere karịa 2 awa.
Brussels ka Amsterdam Na A Train
London ka Amsterdam Na A Train
Berlin na Amsterdam Na A Train
Paris na Amsterdam Na A Train
Anyị na Save A Train ga -enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi njem ndị a 10 ịtụnanya nkwụsị na Europe.
Ịchọrọ itinye blọgụ anyị "Nkwụsị 10 dị ịtụnanya na Europe" na saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Famazing-stops-europe%2F - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
AmazingStops amazingstopseurope akwụsị StopsInEurope ejegharị ejegharị
Train Travel Austria, Train Travel Britain, Train Travel Czech Republic, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Zụọnụ njem Russia, Ingbọ ologo Spain, Train Travel UK, Travel Europe
10 Days Switzerland Travel njegasi
Njem ụgbọ oloko, Train Travel Switzerland, Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe